Ngubani owabulala uYonBenet oneminyaka engama-6 ubudala?
Ngomhla wama-26 wama-1996, umzimba ka-JonBenet Ramsey oneminyaka engama-6 ufunyenwe kwisakhiwo esingaphantsi kweBoulder, kwikhaya laseColorado emva kwenkcazo yentlawulelo yafunyanwa imali efuna ukubuya kwayo. Amalungu omndeni aphantsi kokumangalisa uphando, nangona i-DNA yomfo ifunyenwe kwiingubo zentombazana. Akukho mntu oye wahlawuliswa ngokusemthethweni ngoluphulo-mthetho, oluhlala lungaxilwanga.
Nazi iiphuculwa zamuva kwiPhenyo lokubulala u-JonBenet Ramsey:
UMlawuli oyiNtloko: iCops i-JonBenet Crime Crime Scene
NgoFebruwari 25, 2015 - Lowo owayesakuba yiBoulder, umphathi wamapolisa waseColorado uthi izikhulu zakhe kufuneka zenze umsebenzi ongcono wokulondoloza umonakalo kwindlu apho uJonBenet Ramsey ufunyenwe khona. UMark Beckner uthe ukungabi namandla kwabasebenzi ngenxa yeholide yeKrisimesi kwakukho ityala lokudideka kuloo ndawo.
Ngombuzo we-intanethi kunye neseshoni yokuphendula, u-Beckner uthe abaphenyi kufuneka bahlule abazali, uJohn noPatsy Ramsey, baza bathabatha iingxelo ezipheleleyo ngamnye ngamnye ngosuku.
Esikhundleni saloo nto, xa isibini "esalawulayo" sakhishwa kwaye savunyelwa ukuba siye ekhaya kwaye sasingxoxwa ngokutsha kwakhona kwada kwada kwinyanga ezintlanu. U-Beckner wabiza eso sigqibo "impazamo enkulu."
Ngethuba leseshoni kwi-intanethi, u-Beckner wagxeka kwakhona i-ofisi yommeli wesithili saseBoulder "ukubandakanya kakhulu" kuphando.
U-Beckner uthe ukholelwa ukuba i-DNA efunyenwe kwimpahla eneminyaka engama-6 ubudala iyona nto ibalulekileyo ekufumaneni ummangali kwimeko, kodwa wathi akacinganga ukuba ubani uya kuhlawulwa ngokubulala u-1996, ngenxa yokuba isebe lenze loo mini.
Abazali beJury Abaxhamli beJonBenet, kodwa i-DA ibanjwe ngo-1999
I-jury enkulu ekuphenyweni kokufa kukaJonBenet uRamsey yamangalela ngabazali bakhe ngo-1999, kodwa ummeli wesithili wenqaba ukungayityina inqununu kwaye atyhutshise ityala. Ummeli weSithili u-Alex Hunter akazange akholelwe ukuba unobungqina obaneleyo bokugweba uJohn noPatsy Ramsey ngokuxhaphazwa kwabantwana okubangelwa ukufa, ngokubhekiselele kwingxelo yophando yephephandaba iBoulder.
Isicwangciso sePolisa kwiNgxoxo kuJonBenet
Oktobha 4, 2010
Abaphandi baye bacwangcisa uluhlu olutsha lweengxoxo-ndlebe kwi-case ye-JonBenet Ramsey engaxilwanga, kodwa kungenokuba ubungqina obutsha obuye bangela umsebenzi. Ikomidi elicebisa, elenziwe ngabaphandi abavela kumashishini amaninzi karhulumente kunye neseburhulumenteni, bacebisa unxibelelwano olutsha lwe-intanethi emva kokuhlangana ngo-2009.
I-JonBenet Ramsey Case Ibuyiselwe kwiPolisa yamatyala
Ukuthi baya kusebenzisa iteknoloji entsha, ubuchule, kunye neqhinga lomsebenzi ukuzama ukusombulula ulwaphulo-mthetho, iSebe lePolisa laseBoulder liphinde lithathe iimpembelo kuphando lokubulawa kukaJonBenet Ramsey. Kwiminyaka emithandathu edluleyo, uphando luye lwasingathwa yi-ofisi yommeli wesithili.
I-Ramseys Ikhutshwe kwi-Case ye-JonBenet yokubulala
Julayi 9, 2008
I-Boulder, igqwetha le-Colorado yesigqeba likhuphe iileta ngokucima amalungu asekhaya likaRamsey nayiphi na inxaxheba ekufeni kukaDisemba ka-1996 uJonBenet Ramsey oneminyaka engama-6 emva kokufunyanwa kwe-DNA ubungqina obonisa umenzi wesilisa ongenakuhambelana nentsapho okanye umthetho ukunyanzeliswa. Ubungqina be-DNA, obufunyenwe kwesinye isambatho seYonBenet, iimpawu zangaphambili zangaphambili ezifunyenwe kwi-panties yakhe ngo-1997.
UJohn Mark Karr Uboshwe kwiNgxabano zasekhaya
Julayi 7, 2007
Umntu owafumana ukukhanya kwelizwe ngokuvuma ukubulawa kukaJonBenet uRamsey uye wabanjwa waza waboshwa emva kwengxabano yasekhaya endlwini kayise eSandy Springs, eGeorgia, kufuphi neAtlanta.
Amapolisa athi abanjwe uKarr emva kokufumana u-9-1-1 ukubizela ingxoxo phakathi kukaKarr, intombi yakhe kunye noyise.
UJohn Mark Karr Ngoku Ukhululekile Ukuhamba
Oktobha 5, 2006
UJohn Mark Karr, utitshala wesifundo esikolweni esiprayimari esivumayo ngokumangalela ekubulaweni kukaJonBenet Ramsey ukuba aphume eThailand, ngoku umntu okhululekileyo emva kweentetho zoononophala ezingumntwana wayexoshelwa kuye eCalifornia emva kokuba abatsha bashushisa ukuba abanalo ubungqina obaneleyo bokuya ku vavanyo. ISigqeba seNkundla yaseSonoma iJaji uRene Chouteau yalela uKarr ukuba akhululwe ngokukhawuleza.
UKarr Uguqula I-Pornography Ukunyanzela
Septemba 22, 2006
UJohn Mark Karr, owanikezela ubungqina bobuxoki kwi-case yeJonBenet Ramsey, uye walahla isenzo sokubambisa abashushisi baseCalifornia ababeya kumvumela ukuba aphume entolongweni aze akhonze isigwebo sokuvavanya kwimiba yokuzilahla.
Igqwetha lakhe lithi uKar ugcina engabamsulwa kwaye akana ukwenzela ukuba atyala inetyala engazange enze.
Imirhumo iphosekile kwi-Case yeJonBenet uRamsey
Agasti 28, 2006
Abatshutshisi baseColorado banqume ukuba bangabhengezi uYohn Mark Karr ngokubulala uYonBenet Ramsey oneminyaka emithandathu ubudala, ngoDisemba 26, 1996, emva kokuvavanywa kweDNA kwahluleka ukudibanisa ummangalelwa ubungqina bobugebengu. "I-warrant kuMnu Karr iye yachithwa ngummeli wesithili," kusho umkhulumeli welizwe uSeth Temin. "Abaqhubekiyo kwimeko."
Ukuboshwa kukaJonBenet Ummangalelwa Kuphakamisa Imibuzo Eninzi
Agasti 17, 2006
Ukubanjwa kukaJohn Mark Karr oneminyaka engama-41 ubudala eBangkok, eThailand ngenxa yokubulawa kukaJonBenet Ramsey ngo-1996 kwaye iingxelo zakhe kubaphenyusi ziye zaphakamisa uxhalaba malunga nokuqinisekiswa kokuvuma kwakhe. Ingqungquthela yeendaba ngeBoulder, i-Attorney District District, uMary Mary Lacy, wayibonakalisa ingqiqo ekuphenyweni, njengoko engavumi ukwenza nayiphi na imibono ngobungqina bokuba kunjalo.
Utitshala uboshwe kwi-JonBenet Ramsey Case
Agasti 16, 2006
Umntu okwangoku ugcinwa eThailand ngeentlawulo zesini ezingahambelaniyo ngokubhekiselele ekubulaweni kukaJonBenet Ramsey oneminyaka emithandathu ubudala eBoyer, eColorado ekhaya eliphantse kwiminyaka elishumi edlulileyo. Ummangali, othe oogunyaziwe uthi uvume ukubulala, uya kubuyiselwa eUnited States ngeveki ezayo.
UJonBenet Ramsey Uphando Utshintsho kwakhona
Matshi 20, 2006
Umphenyi okhokelayo wecala lokubulala likaJonBenet Ramsey uzimisele ukutshintsha kwakhona, kodwa umqhubi omtsha nguye owayesebenze kuphela kwiKrisimesi yokufa kuka-1996 yentombazana eneminyaka emithandathu ubudala kunye noPatsy Ramsey.
UTom Bennett, umphenyi ohlala phantsi kwiSebe lePolisa lase-Arvada, wajoyina i-ofisi yomtshutshisi eBoulder ngo-2003 esebenza kuphela kwiimeko zeRamsey, esebenza iiyure ezingama-20 ukuya kwi-30 ngeveki.
Umbulali kaJonBenet udibene nomnye ukudlwengula?
Ngomhla wama-20, 2004
Icandelo lokubulala u-JonBenet uRamsey ityala lokukholelwa ukuba umntu oseneminyaka engama-6 ubudala, ubuye waxabela kwakhona emva kweenyanga ezilisithoba, ngokubetha ngesantombazana eneminyaka eyisibhozo ubudala, owayesesikhatsini esifanayo somdaniso kunye noJonBenet, eBoulder, Igumbi laseColorado. I-CBS "IiHora ezingama-48 zeNgcaciso" ingxelo kwakhona ithi ubungqina be-DNA kwimeko yeJonBenet ibhekisela kwindoda engahambelani nentsapho yakwaRamsey. Kwiminyaka emibhozo ukusuka ekubulaweni, uphando lujoliswe ngokukhawuleza kumalungu oonyana bakaRamsey.
Abahle, Ababi nababi be-Turning 50 kubaTyhini
Ukuhlaziywa ngokubanzi kovavanyo lwe-STAR yeMathematika ye-Intanethi
Kutheni i-Golf Hole Size 4.25 amasentimitha kwi-Diameter?
Izinto eziyimfuneko ukuba zibe kunye neRide
Iindlela ezili-6 zokubhiyozela ukuphela kwe-Semester yakho yeKholeji
Visa para jóvenes para trabajar como staff campamento de verano e USA
Funniest Sarah Palin Memes
I-Essential Dolly Parton Albums